‘आजीवन समाजसेवामा कटिवद्ध छु’ : तीर्थराज न्यौपाने – Chitwan Post
लमजुङको दुराडाँडामा विसं २००३ सालमा जन्मिएका तीर्थराज न्यौपाने रत्ननगर–१२, घेघौलीका स्थायी बासिन्दा हुन् । जीवनको उत्तराद्र्धमा पनि समाजसेवामा उत्तिकैै सक्रिय रहेका उनी विभिन्न संघसंस्थामा आवद्ध छन् । उनको सक्रियता युवाका लागि लोभलाग्दो मात्रै छैन, प्रेरणादायी पनि छ । नेपाल स्काउट उनीसँगै जोडिएर आउने पर्यायवाची संस्था हो । उनी नेपाल स्काउटका चितवन आयुक्त हुन् । साउथ एसियन चिल्ड्रन फोरम सार्कका सल्लाहकार सदस्य, अन्तर्राष्ट्रिय स्काउट एण्ड गाइड फेलोसिप–नेपालका उपाध्यक्ष एवम् साउथ युथ फोरमका सचिवको जिम्मेवारी पनि उनले निर्वाह गरेका छन् । ०२८ सालदेखि नेपाल माविबाट स्काउटको सहायक शिक्षकबाट सुरू भएको उनको स्काउट यात्रा यद्यपि जारी छ । युवालाई अनुशासित बनाउन र विपत्तिमा उद्धार तथा मानवीय सहयोग गर्न यो संस्था क्रियाशील छ । नेपालमा दैवी विपत्तिहरुमा न्यौपानेकै सक्रियतामा स्काउटले उद्धार, राहत तथा मानवीय सहायता गर्दै आएको छ । स्काउटका हरेक गतिविधि एवम् अन्तर्राष्ट्रिय गोष्ठी, सेमिनार र क्याम्पहरुमा विभिन्न भूमिकामा उनको मह¤वपूर्ण सहभागिता रहँदै आएको छ । २९ वर्ष शिक्षण पेसामा बिताएका न्यौपानेको नेपाली कांग्रेसले सञ्चालन गरेको नेपालका प्रजातान्त्रिक आन्दोलनहरुमा पनि उत्तिकै त्याग र योगदान रहँदै आएको छ । प्रस्तुत छ– समाजसेवी न्यौपानेसँग चितवनपोष्टले गरेको चियागफ–
–पहिलो त इच्छाशक्ति हुनुपर्छ । समाजसेवा गर्न समय पनि चाहिन्छ, त्यो मसँग पर्याप्त छ । अर्कोकुरा पारिवारिक रुपले तनावमुक्त हुनुपर्छ, मेरो हकमा पारिवारिक तनाव छैन । पारिवारिक दायि¤व र जिम्मेवारीबाट पनि म मुक्त छु । छोराहरुले आ–आफ्नो व्यवसाय गरेका छन् । घरायसी कामसमेत मैले हेर्नुपर्दैन । आफूले सकेसम्म र भ्याएसम्म सामाजिक काममा समय दिन मन लाग्छ । जुनसुकै ठाउँबाट पनि बोलावट भएको ठाउँमा म सकभर उपस्थित भएकै हुन्छु । यसैमा समर्पित हुन आनन्द आउँछ । म आजीवन समाजसेवामै समर्पित रहने छु ।
–संघसंस्था त धेरै छन्, जसको नाम यहाँ उल्लेख गर्दा लामो हुन्छ । मेरो प्रमुख जिम्मेवारी नेपाल स्काउटमा छ । जिल्ला स्काउटको म आयुक्त हुँ, यसको हरेक गतिविधि र कार्यक्रममा सक्रिय रहन्छु । यस्तै इन्टरनेशनल स्काउटको गाइड फेलोसिपमा उपाध्यक्ष छु, प्रायः चितवनबाहिरै बढी व्यस्त हुन्छु । यस संस्थामा युवा परिचालन, क्षेत्रीय क्याम्पिङ र प्रशिक्षणको भूमिका मैले निर्वाह गर्दै आएको छु ।
–स्काउट विशुद्ध राजनीतिक एक अन्तर्राष्ट्रिय संस्था हो । बेलायतका पूर्व आर्मी चिफ लर्ड वेडेन पावेलले सन् १९०७ मा स्थापना गरेको अन्तर्राष्ट्रिय युथ भोलेन्टियर्स संस्था हो । नेपालमा विसं २००९ देखि स्थापित दोस्रो गैरराजनीतिक सामुदायिक संस्था स्काउट नै हो । यस संस्थाले स्कुल÷क्याम्पसहरुका युवालाई अनुशासित, चरित्र निर्माण, खेलकुद र विपत्तिमा मानवीय सहयोग गर्न सिकाउने परोपकारी संस्था हो । यसको सिद्धान्त जुनसुकै बेला पनि तयार रहनु र जस्तोसुकै विपत्तिमा पनि उद्धार र सहयोग पु¥याउनु हो । आगलागी, बाढीपहिरो, भूकम्पलगायतका दैवी विपत्तिहरुमा मानवीय सहायताका लागि रेस्क्यु टोली संलग्न हुन्छन् । यस संस्थाले चितवनमा २०५० सालको बाढीमा लोथरका स्थानीय वासिन्दालाई सुरक्षित ठाउँमा सार्न र समस्यामा परेका पीडितहरुलाई उद्धार कार्यमा खटिएर मह¤वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो । यस्तै, ०७२ मा भूकम्पका बेला राहत संकलन गरी गोरखा र चितवनकै पहाडी चेपाङवस्तीमा राहत वितरणमा सक्रिय रह्यो । जिल्ला समन्वय समितिसँग सहकार्य गरेर राहत वितरण कार्यमा प्रभावकारी भूमिका खेलेको थियो । युवालाई साहसिक प्रदर्शन गर्न र सामूहिक सहयोग र सद्भाव कायम राख्न पनि यो संस्था क्रियाशील छ ।
४) चितवनमा कति स्काउट छन् ? स्काउटमा प्रवेश गर्ने मापदण्ड के छ ?
–चितवनमा प्रायः सबै स्कुल र निजी विद्यालयमा करिब ३५ सय जना स्काउटका विद्यार्थी छन् । जसलाई २०० जना शिक्षकले तालिम दिँदै आएका छन् । यसमा ३२ जनाको ग्रुप हुन्छ र यो पाँच तहको हुन्छ । हरेक ३२ जनाको समूहलाई एक÷एक शिक्षकले तालिम प्रदान गर्छन् । स्काउटमा ६ वर्षदेखि ११, ११ देखि १६ र १६ देखि २५ वर्षसम्म तीन तहमा आठ÷आठ जनाको ट्रुप हुन्छ र प्रत्येक ट्रुपमा एकजना ‘लिडर’ हुन्छन् । स्काउटमा प्रवेश गर्न शारीरिक रुपमा तन्दुरुस्त र हरेक साहसिक विद्यार्थी सहभागी हुन सक्छन् । यसमा आर्मीकै जस्तो तीन महिने कोर्ष पूरा गर्नुपर्छ । अनुशासित हुनुपर्छ । सिस्टममा चल्ने र शिक्षकको कमाण्ड मान्ने नैतिकवान् हुनुपर्छ । यो ‘भोलेन्टियर’ संस्था भएकोले यसमा प्रवेश गरेदेखि आफ्नो सम्पूर्ण खर्च आफैँले व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । ‘सेल्फ डिपेन्डेन्ट’ हुनुपर्ने भएकाले जोकोही यसमा आकर्षित हुँदैनन् ।
५) स्काउटमा सक्रिय भएयता कुन कुन देश भ्रमण गर्नुभएको छ ?
६) विदेशमा स्काउटप्रतिको आकर्षण कस्तो पाउनु भयो ?
७) उसो भए नेपालको राजनीतिलाई स्थायित्व गर्न के गर्नुपर्ला ?
–नेपालमा जबसम्म राजनीतिक स्थायित्व हुनसक्दैन, तबसम्म परिवर्तन आउँदैन । त्यसका लागि समयमै निर्वाचन हुनुपर्छ । असल नेतृत्व र दूरदर्शी नेता हुनुपर्छ । हाम्रो देशमा दूरदर्शी नेता नभएका होइनन्, तर समन्वय र इच्छाशक्ति नहुँदा देशले यो हविगत बेहोर्नुपरेको हो । खुवी भएर पनि समन्वयन गर्ने विषयमा कमजोरी देखिँदा यस्तो देखिएको हो । अब राजनीतिक दलका नेताहरु सुध्रिनुपर्छ ।
८) तपाईं राजनीतिमा पनि आवद्ध हुनुहुन्छ । स्थानीय निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिनु भएन ?
–राजनीतिमा युवा नेतृत्व आउनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ । पेसागत राजनीतिमा आवद्ध रहेको र नेपालको धेरै परिवर्तनमा सक्रिय भूमिका खेलेकोले जुनसुकै जिम्मेवारी पूरा गर्न सक्ने सामथ्र्य र नेतृत्व क्षमता मसँग छ । केही गरेर देखाउने र परिवर्तनको परिकल्पना गर्न सक्ने खुवी भएकाले मैले आफ्नो वडाको विकास योजनाहरुको डाफ््ट गरिरहेको छु । अहिले वडा नं १२ बाट नगर समिति सदस्य (नसस)मा उम्मेदवारी दिएको छु । केही काम गर्न पद चाहिने कारण नसस भएरै पनि मैले पुरानो ढर्रा परिवर्तन गरेर केही परिवर्तनको अनुभूति गराउन सक्छु भन्ने आत्मविश्वास छ । मैले स्थानीय तहको निर्देशिका अध्ययन गर्दा शिक्षित, दूरदर्शी र अनुभवीले मात्र काम गर्न सक्ने देखेको छु । दातृसंस्थासँग समन्वय गर्न सक्ने र दूरदृष्टि बोकेको नेतृत्व अब चाहिन्छ । पुरानो ढर्राले न पदको सदुपयोग गर्न सक्छ, न त त्यस्तो कार्य क्षमता नै राख्ने देखिन्छ ।
९) जीवनदेखि कत्तिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?
–एकदमै सन्तुष्ट छु । पारिवारिक बन्दोबस्त छ । कुनै किसिमको तनाव छैन । स्वतन्त्र छु । आर्थिक समस्या पनि छैन । आफूलाई चाहिने खर्च पर्चको व्यवस्थापन म आफैँले गर्न सक्छु । मेरो चितवन बसार्इं कम हुन्छ, चाहेका बेला जहाँ जान पनि मलाई छुट छ । स्वतन्त्र भएकै कारण बिहानदेखि घरबाहिरै रहन्छु, सामाजिक संस्था, साथीभाइसँगै मेरो दिनचर्या बित्छ । बूढेसकाल लागेको आभाष कत्ति छैन । किनभने, म अझै पनि बच्चाहरुलाई पिटी खेलाउँछु । त्यसले व्यायाम हुनुका साथै शारीरिक तन्दुरुस्ती पनि बढाउँछ, यो सबै स्काउटकै देन हो । क्याम्प र ज्याम्बोरीहरुमा मेरो कमान्डिङ देखेर अरु स्काउटका साथीहरु दङ्ग पर्छन् । म यो उमेरसम्म पनि क्रियाशील हुनुको राज पनि यही नै हो ।